Ithegi: imithombo yeendaba ezuziweyo | Martech Zone
Ithegi: iindaba ezifumanekileyo
Yintoni i-POE? Ihlawulwe, yeyabanini, ifunyenwe… Kwaye kwabelwana ngayo ... kunye neMedia eguqulweyo
NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2021 NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2021 Douglas Karr
I-POE sisichazi seendlela ezintathu zokuhambisa umxholo. Imithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyiyeyakho kunye noMvuzo zonke zizicwangciso ezifanelekileyo zokwakha igunya lakho kunye nokusasaza ukufikelela kwakho kwimidiya yoluntu. Imithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyabelweyo, eFunyenwe yeMithombo yeendaba- kukusetyenziswa kweendlela zentengiso ezihlawulelweyo ukuqhuba ukugcwala kunye nomyalezo opheleleyo wohlobo lwento kuwonkewonke. Isetyenziselwa ukudala ulwazi, gxuma ezinye iindlela zosasazo kunye nokwenza ukuba umxholo wakho ubonwe ngababukeli abatsha.
Ngamanye amaxesha siyalibala ukuba singene nzulu kangakanani kwishishini kwaye silibale ukunika umntu intshayelelo kwisigama esisisiseko okanye ii-akhronimi ezijikelezayo xa sithetha ngentengiso ekwi-Intanethi. Ngethamsanqa kuwe, uWrike ubeke le ntengiso ye-Intanethi kwi-101 infographic ehamba kuwo onke amagama asisiseko entengiso ekufuneka ubambe incoko kunye nengcali yakho yentengiso. Umanyaniso lweNtengiso -Ufumana amaqabane angaphandle kwintengiso yakho
KwiNtengiso yeDijithali ka-2015
NgoMgqibelo, nge-7 kaFebruwari ngo-2015 NgoLwesihlanu, Februwari 6, 2015 Douglas Karr
Sibona utshintsho olukhulu xa kufikwa kwintengiso yedijithali kwaye le infographic evela kwi-Smart Insights iphula izicwangciso kwaye inikezela ngedatha ethetha kakuhle kutshintsho. Ukusuka kwimbono yearhente, sibukele njengoko iiarhente ezininzi nangakumbi zisamkela uluhlu olubanzi lweenkonzo. Sele kuyiminyaka emi-6 okoko ndazisayo iarhente DK New Media, kwaye ndaye ndacetyiswa ngabanye babanikazi abaphambili be-arhente kwishishini
Ukunyuselwa komxholo kuxhomekeke kwiindlela eziphambili ze-3-imithombo yeendaba ehlawulelweyo, imithombo yeendaba ezingabanini kunye nemithombo yeendaba efumeneyo. Nangona ezi ntlobo zosasazo zintsha, kukugqama kunye nokusondela kwimithombo yeendaba kunye neyabasebenzi etshintshileyo, ecela umngeni kwimithombo yeendaba ehlawulwa ngokwesiko. UPamela Bustard, iMedia Octopus ehlawulweyo, eyeMali kunye neNkcazo yeMithombo yeendaba ngokukaMedia Octopus, iinkcazo zezi: Imithombo yeendaba ehlawulelweyo- Nantoni na ehlawulelwa ukuqhuba ukugcwala kwabantu
I-13 yeQela eliDumileyo leB2B lokuThengisa amaCebo
NgoMvulo, Juni 30, 2014 NgoLwesine, Julayi 3, 2014 Douglas Karr
Le yayiyimbonakalo enomdla endifuna ukuyabelana noWolfgang Jaegel. Ayisiyiyo le nto kuba inika ukuqonda ukuba zeziphi iindlela zokuthengisa ezisasazwa ngabathengisi be-B2B, kodwa ngenxa yesikhewu endisibonayo kumxholo osasazwayo xa kuthelekiswa nefuthe lezo zicwangciso. Uluhlu lokuthandwa, uluhlu lwamajelo eendaba ezentlalo, amanqaku kwiwebhusayithi yakho, iileta zeendaba, iibhlog, iziganeko zomntu, izifundo zamatyala, iividiyo, amanqaku
Jamballa: Ukufikelela kwiBlogger yeeBrand
NgeCawa, uJuni 1, 2014 Douglas Karr
Ukufikelela kubhlogi kunokubonelela ngamashishini ngohlolo oluphezulu, ulwazi ngemveliso kunye nokuqonda okuhle kwegama, ngokulungelelaniswa neebhlogger ezihlonishwayo kwishishini lakho. I-Jamballa yinkonzo entsha ehambelana neebhlog kunye neempawu kunye ngokudibeneyo ngokusekwe kwiinqobo ezichaziweyo. Oku kuthetha ukuba iibhlogi azikaze ziphazanyiswe ziimveliso ezingenamdla kuzo kwaye amashishini aqhagamshelwe kuphela kwiibhlog ezifuna ukusebenza nazo. UJamballa ukwabonelela ngeenkonzo zokukhululwa koonondaba eziphuma ziye
Yintoni uLwabiwo loMxholo?
NgoLwesithathu, Meyi 7, 2014 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Craig uLile
Umxholo ongabonwayo ngumxholo onika incinci kwimbuyekezo kutyalo-mali, kwaye, njengomthengisi, usenokuba uqaphele ukuba kunzima kangakanani ukufumana umxholo wakho ubonwe nangamaqhekeza abaphulaphuli obusebenze nzima kangaka ukuba ubakhe kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngelishwa, ikamva kunokwenzeka ukuba libambe ngokufanayo: I-Facebook kutsha nje ibhengeze ukuba injongo yayo kukuthatha ukufikelela kwi-organic ye-organic kuye
Umanyano: Iqonga lokuSebenza kweNtlalo
NgoMvulo, nge-9 kaDisemba ngo-2013 NgoMvulo, nge-9 kaDisemba ngo-2013 Douglas Karr
Umanyano lubonelela ngetekhnoloji yokuthengisa ilifu kunye nokusetyenziswa okwenza ukuba umbutho wakho ulawule yonke intambo yokuphila yentengiso, ukuhambisa i-ROI ecacileyo nenenqobo. Iqonga eliManyeneyo libonelela ngenkqubo emanyeneyo yokurekhoda iimveliso, iiarhente kunye nabathengisi. Izibonelelo zeQonga eliSebenzayo lokuSebenza kwezeNtlalo ungumnikazi kunye nokulawula idatha yakho yentengiso-Iqonga lokuSebenza kwezeNtlalo lidibanisa zonke iiarhente, abathengisi kunye neempawu osebenza nazo kwinkqubo enye yokuthengisa ngelifu, ikunika umbono opheleleyo wabo bonke